Indray mandeha ihany
Manampia hafatra manokana
Firenenafanjakana mitambatraEtazonian'i AmerikaAfghanistanAlbaniaAlzeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAntigua sy BarbudaArzantinaArmeniaAostraliaAotrisyAzerbaijanBahamasyBahrainBangladesyBarbadosBelarosiaBelzikaBelizeBeninBermudesBhutanBoliviaBosnia sy HerzegovinaBotsoanaBrezilaBroneyBolgariaBorkina FasoBurundiKambodzaKameronaKanadaCape VerdeCayman IslandsRepoblikan'i Afrika AfovoanyTchadShilyShinaKolombiaComoresCongo, Repoblika Demokratikan'iCongo, RepoblikaCosta RicaIvory CoastKroasiaKiobàSipraRepoblika TchekyDanemarkDjiboutiDominicaRepoblika DominikaninaTimor atsinananaEkoateraEjiptaEl SalvadorGinea GineaEritreaEstoniaEthiopiaFaroe IslandsFidjiFailandyFrantsaPôlinezia frantsayGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGresyGroenlandyGrenadyGuamGuatemalaGineaGuinée-BissauGoianaHaitiHondurasHong KongHongriaIslandyIndiaIndoneziaIranIrakIrlandyIsiraelyItaliaJamaikaJapanaJordaniaKazakhstanaKenyaKiribatiKorea AvaratraKorea AtsimoKosovoKoetyKyrgyzstanLaosLetoniaLibanonaLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLitoaniaLuxembourgMakedoniaMadagasikaraMalawiMaleziaMaldivesMaliMaltaNosy MarshallMaoritaniaMaorisyMeksikaMikrôneziaMoldaviaMonacoMongoliaMontenegroMaraokaMozambikaMyanmarNamibiaNauruNepalPays-BasNovely zelandyNicaraguaNigerNizeriaNorthern Mariana IslandsNorvezyOmanPakistanPalauPalestina, State nyPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPeròFilipinaPoloninaPortiogalyPuerto RicoQatarRomaniaRosiaRwandaSaint Kitts sy NevisSaint LuciaSaint Vincent sy ny GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome sy PrincipeArabia SaoditaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint MaartenSlovakiaSloveniaNosy SalomonSomaliaAfrika AtsimoEspainaSri LankaSodànaSudan, AtsimoSurinameSoazilandySoedaSoisaSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad sy TobagoToniziavorontsilozaTurkmenistanTuvaluOgandaUkraineEmirà Arabo MitambatraUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezoelai VietnamVirgin Islands, BritanikaVirgin Islands, USYemenZambiaZimbaboe
Ho an'ireo mpamatsy vola amerikana maniry hanome amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny hetra dia azonao atao ny misafidy ny hanohana ny Blue Ventures amin'ny alàlan'ny Blue Ventures Conservation CAF America Friends Fund: tsindrio eto raha mila fanazavana fanampiny.
Adiresin'ny làlana Adiresy-dalana, 2 fihetseham-po County / Fanjakana / Faritra ZIP / Postcode
Ny fanampiana fanomezana fanampiana dia ahafahantsika mampitombo ny sandan'ny fanomezanao amin'ny 25% nefa tsy mandany vola denaria fanampiny izany!
Eny, mpandoa hetra UK aho ary tiako horaisin'ny Blue Ventures ho fanomezana fanomezana fanomezana ny fanomezana rehetra mendrika ny vola natao tao anatin'ny efa-taona lasa ary ny fanomezana rehetra nataoko nanomboka tamin'ny datin'ity fanambarana ity mandra-pampandrenesako anao raha tsy izany.
Manamafy aho fa nandoa na handoa hetra amin'ny fidiram-bola sy/na hetra amin'ny renivola isan-taona (6 aprily herintaona ka hatramin'ny 5 aprily manaraka) izay farafaharatsiny mitovy amin'ny habetsaky ny hetra ataon'ny fikambanana mpanao asa soa na Amateur Community. Ireo klioba ara-panatanjahantena (CASCs) izay anomezako vola dia hamerina ny fanomezako ho an'io taom-ketra io. Takatro fa tsy mahafeno fepetra ny hetra hafa toy ny VAT sy ny hetran'ny filankevitra. Takatro fa ny fiantrana dia hamerina ny hetra 25p isaky ny £1 omeko. Azafady ampahafantaro anay raha te hanafoana ity fanambarana ity ianao, hanova ny anaranao na ny adiresinao, na tsy handoa hetra ampy intsony amin'ny fidiram-bolanao sy/na ny tombom-barotrao.
Te hahazo fanavaozana momba ny fiarovana ny Blue Ventures aho (eo ho eo isaky ny 3 volana)
Ny fiarovanao sy ny fiainanao manokana no laharam-pahamehanay. Ny fandoavam-bola dia voafehin'ny encryption sy azo antoka, ary tsy hizara na hamidy ny mombamomba anao mihitsy izahay. Afaka mahafantatra bebe kokoa amin'ny anay ianao fepetra sy fepetra page.
Ny antsipirian'ny karatrao*
Antsipiriany amin'ny karatra
Mety haka fotoana vitsivitsy ny fanomezanao, tsindrio fotsiny ny bokotra indray mandeha.
manome ny fianakaviana ny fitaovana ilaina amin'ny fananganana orinasa fiompiana ahidrano, fampivoarana ny fidiram-bola ary fampihenana ny fanjonoana.
manofana mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka hanolotra fanabeazana aizana ho an'ny vehivavy ao an-tanànany, manome hery ny fianakaviana manana fahafahana misafidy ny isa sy ny elanelan'ny fahaterahany.
mitondra mpanjono any amin'ny tanàna mifanolo-bodirindrina mba hianatra avy amin'ny traikefan'izy ireo momba ny fitantanana an-dranomasina, ka niteraka ezaka bebe kokoa amin'ny fitantanana ny jono eo an-toerana.
afaka manohana mpianatra amin'ny lisea amin'ny boky, fanamiana ary fitaterana mandritra ny taom-pianarana iray manontolo, manangana fahaiza-manao ho an'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka.